FAQs - Foshan Zhitao Art Girazi Fekitori
Tipei divi, huwandu, zvakare zvaunoda, isu tinokutumira iwe chitaurwa maererano nezvako mukati maawa makumi maviri nemana.
Mimwe mienzaniso yatinoda kuti ive neyakaenderera shoma odha huwandu. Iwe ungada here kutibata nesu uye titumire iwo iwo ruzivo, isu tinokutumira iwe mhinduro.
Nokuti ivhu, kutungamirira nguva anenge mazuva gumi. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yekutungamira nguva isingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
50% dhipoziti pamberi, 50% mwero usati watumirwa.
• Green 100% zvizere zvishandiswezve, Noble .Unique .Runako.
• Hapana zvisimbiso kana makemikari akaomarara anoshandiswa kuzvigadzira.
• Yekuchengetedza-isina uye yakasimba kwazvo.
• Nzvimbo yepamusoro yehukama pamusika.
• Hapana chisi chakaburitswa uye hapana chakaipa pahunhu hwemhepo.
• Radon yemahara (ichienzaniswa negranite)
•Fekitori yakananga kutengesa mutengo, hapana mugove anowana iwo mutsauko wemutengo.
•Uine makore anopfuura gumi neshanu ezvakaitika kune zvigadzirwa zvegirazi.
•Mahara sampuli ane anopfuura gumi mhando dzegirazi pakaunda pamusoro.
•Kwete MOQ yezvakawanda zvezvinhu, kukurumidza kuendesa kwavari.
•Tinogona kuburitsa girazi zvinoenderana nezvaunoda, gamuchira zvakajairwa maodha.